Akwukwo Nso di ezigbo mkpa n’ime Christian Science. Mary Baker Eddy, onye nke malitere Christian Science tinyere uchu na nghota akwukwo nso oge obu nwatakiri, ma guokwa zia ya nke oma, dika okenye. Site na nghota akwukwo nso a, o choputara n’ime ndu ya onweya n’ike niile gbasara igwo oria di na-aka Chukwu. Nke a gbara ya ume, imu edemede niile nke akwukwo nso nke oma, ya na ichoputa maa ghota ihe omimi ya putara dika Chukwu si cho. Nke a nyere ya amamihe oji dee akwukwo nkeScience and Health with Key to the Scriptures. Akwukwo Nso na Science and Health ka otere manu ibu onye ozuzu aturu nke uka Christian Science.
Nweta omumu Akwukwo Nso
N’eba ka I ga’hu ihe Omumu Akwukwo Nso nke Christian Science n’okwu Igbo. Ndi madu jikoro onu n’efu weputa ntugharia dika etu ndi Christian Science Publishing Society nyere ha ikike. Ulo uka obula, ndi Ulo Ogugu akwukwo obula, nwere ike ihu na ihe omumu a, ruru ndi obodo ha aka.
Kpatu aka ebe esere ezeaka maka ibiputa Omumu Akwukwo Nso nke gi.
O ga-amasi anyi ma igwa anyi ebum n’uche gi gbasara ntughari a. Inwekwara ike izitara anyi ozi na-akara nka—translatorsupport@csps.com.